09/08/13 ~ Myanmar News Updates
"လှည်းဆောင့်လိုက်ရင် တစ်ချက်တည်း အသက်ထွက်မှာပဲ" ဟု သူက ထင်မြင်ချက်ပေး၏။ ဆိုလိုသည်က ဤဆေးခန်းသို့ လာရောက်ဖို့ အခြေအနေ မရှိဘူးပေါ့။ ကျွန်မတို့အတွက်က လူနာတစ်ယောက်ကို သွားကြည့်ပြီးကုသပေးဖို့ ဘာအခက်အခဲ ပြဿနာမှ မဖြစ်ပါ။ သူတို့ကို ကုသပေးလို၍ပဲ မြို့ပေါ် ဆေးရုံကြီးမှ ဝေးလံသော ဤျရွာကလေးအထိ ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ မဟုတ်လား.. သွားကြည့်ကြတာပေါ့။
တရက်အတွင်း အမျိုးသား၉၁၉ ယောက်နဲ့ အိပ်ပြီး စံချိန်သစ်တင်တဲ့အမျိုးသမီး (copy ကြိုက်သော မမ ညိမများ ဒါတွေကို ဖတ်ပဲ ဖတ်ပါ အတုမယူပါနဲ့).
5:11:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အမေရိကန်အမျိုးသမီး Lisa Sparks ဟာ အမျိုးသား ၉၁၉ ယောက်နဲ့ တရက်အတွင်းမှာအိပ်ပြီး စံချိန်သစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ (နာမည်က မြန်မာစကားလုံးနဲ့ ဆိုရင်တော့ နာမည်နဲ့ လူနဲ့ လိုက်ပါတယ်နော်။ လီဆာစပတ်ခ်)
ဒီပြိုင်ပွဲမှာ သူနဲ့ တခြားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ကြတာပါ။ အဲဒီနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်က ယခင်က အမျိုးသား ၇၅၉ ယောက်နဲ့ အိပ်ပြီး စံချိန်တင်ထားသူအမျိုးသမီးပါ။ ဒိုင်လူကြီးတွေအပြင် ကင်မရာမန်းခြောက်ယောက်ကလည်း ဒီပြိုင်ပွဲကိုသေသေချာချာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အောက်က ဒီအံ့သြချီးကျူးဖွယ်အမျိုးသမီးရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ရင်း အားပေးလိုက်ကြပါဦး။ဗွီဒီယိုကော မကြည့်ချင်ကြဘူးလား။
2:02:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
Miss Grand International 2013 ကိုသွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဦးမယ် မြန်မာအလှမယ် ထားထက်ထက်ကို
12:51:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
Miss Grand International 2013 ကိုသွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဦးမယ် မြန်မာအလှမယ် ထားထက်ထက်ကို Miss Supranational ပြိုင်ပွဲဝင် Miss Internet ဆုရ ခင်ဝင့်ဝါကို လာရောက်ကြိုဆိုတာ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ တွေ့ရစဉ်။
ဓါတ်ပုံ - ကောင်းထက်ကျော်
10:00:00 AM Myanmar Newsupdates No comments
အခုကျွန်တော်တင်ပေးမှာကတော့ wifi talkie ဆိုတဲ့ Android apk လေးပါ။သူကဘယ်လို အသုံးဝင်လဲပြောရရင် နည်းနည်းရွှီး မယ်နော် ဟီးးးးးးးးးးးး Zapya apk နဲ. ပုံစံတူပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူက ဖိုင်တစ်ခုနဲ.တစ်ခု လွှဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာ သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး ဖုန်းပြောလို.ရမယ် မက်ဆေ့ ပို.လို.ရမယ်ဗျာ စာသင်ခန်းထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် နီးနီးလေးနဲ. မက်ဆေ့ပို.နေရတဲ့ ကြူကြူစိန် ကိုကို မမ များအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် ဖုန်းဘေလ်မကုန်ပါဘူးအင်တာနက်မကုန်ပါဘူး (ကျွန်တော်ကြော်ငြာပေးတာပါ)
(ထပ်ပြောမယ်နော် mpt ကိုလဲ လုပ်ကျွေးစရာမလိုဘူး အင်တာနက်လိုင်းလဲမကုန်ဘူး ချစ်သူနဲ.လဲအဆက်အသွယ်မပျက် ဘက်ထရီမကုန်မခြင်းသာကြူကြတောဗျာ
Miss Grand International 2013 ကိုသွားရောက် ယှဉ်ပြ...